Zvizorwa zvesimbi manejimendi manejimendi matanho achaunzwa. Ndezvipi zvakanaka zvekushandisa zvinyorwa zvemagetsi?
Munguva pfupi yapfuura, iyo State Drug Administration yakapa tsamba pamusoro pekukumbira pachena pfungwa pamusoro pe "Administrative Measure for Cosmetics Labeling (Draft for Solicitation of Comments)" (inova inozonzi "Draft for Comments") kukumbira pfungwa dzevanhu. Pakati pavo ...
RFID nzvimbo mhinduro inotsigira otomatiki Positioning yekuchengetera zvinhu
Zvichienderana neiyo RFID system, iyo reverse logistics mupiki Asset Kudzorera Nyanzvi (ARS) inogona kusevha makumi matatu emaawa-maawa pasvondo. Panguva imwecheteyo, nekuda kweiyo RFID system iyo inoteedzera kuwanda kwemidziyo yakashandiswa, kurongeka kwekugadzira kwawedzerawo ne30%. Mushure mekusimbisa kuti RFID tekinoroji pr ...
Musiyano uripo pakati peanoshanda, semi-anoshanda uye mapusa maRID tag
Iyo yakazara RFID system inoumbwa nematagi, vaverengi uye dhata yekufambisa yekugadzirisa masisitimu. Inowanzo kuve yakakamurwa kuita inoshingaira RFID, semi-inoshanda uye isina basa RFID. Iko mukati meiyo RFID tag iri chip ine kanyanga. Iyo chip inochengetera ruzivo rwunogona kuratidza chakanangwa, uye chikuru functi ...
Kumhiri kwemakungwa kwakagadzira maseru maseru anokwanisa kuongorora ziya nekupururudza kuburikidza neRFID, iyo inogona kusungirirwa paganda
Munguva pfupi yapfuura, Stanford University uye University of Berkeley vakaparadzanisa zvakasiyana masensa maviri anogona kusungirirwa paganda. Iwo akareruka chaizvo uye anogona kuita isina waya kuona uye kuunganidza akaomesesa ehupenyu data. Aya maviri marudzi e sensors haadi kubatana kweiyo ext ...
RFID tekinoroji inobatsira mapurazi kuvhura nzvimbo nyowani
Nekukurumidza kukura kwehupfumi uye nekukurumidza kukurumidza kwehupenyu hwevanhu marongero, dhayeti dhizaini yevatengi yakave neshanduko huru. Iko kudikanwa kwezvakanyanya-zvinovaka muviri zvekudya senge nyama, mazai, uye mukaka zvakawedzera zvakanyanya, uye hunhu uye kuchengetedzeka kwechikafu zvine ...
Kupinda zvakadzika muhupenyu hwedu, ndeapi mashandisiro eRFID tekinoroji muInternet yezvinhu?
Kana iwe uchida kutaura nezve pfupi-daro Internet yeZvinhu network tekinoroji, zvinofungidzirwa kuti munhu wese anonyanya kuziva nezveBluetooth. Asi zvirizvo, pamusoro peBluetooth, RFID radio frequency chiziviso tekinoroji yatopinda muhupenyu hwedu hwezuva nezuva, uye inotoshandiswa yega yega ...
UHF RFID tekinoroji inoita moto-kurwisa zvishandiso manejimendi nyore uye nyore
Mukuita kwekudzimisa moto, manejimendi emidziyo yekudzimisa moto yakakosha kwazvo. Mune emergency, maitiro ekuona kuti unokwanisa kuunza michina yekudzimisa moto yakakwana kusangana nechinzvimbo chepa-saiti mune yekukurumidzira ibasa guru rechikamu chekurwisa moto. Maitiro ekuvandudza, kugadzira, uye sc ...
RFID yangu yekufambisa kudzora inoita kuti hunyanzvi hubudirire
Kuvandudzwa kwemidzi yangu ndeye yakakosha mashandiro ekubatanidza emabhizinesi anogadzira zviwanikwa. Iri ibasa rakakosha kune mamaneja emabhizinesi kuona kushomeka zvine hungwaru nesainzi zviwanikwa zvemugodhi uye kuona matanho akachengeteka ekugadzirwa kwemigodhi nekufambisa mashandiro. Kazhinji, b ...
Shenzhen inozivisa yemahara kudyara kweRFID machipisi kune akanyoreswa imbwa
Kana iwe uchida imbwa, ipa imbwa yako "chip", iwe ungade here? Musi waMay 30, yechipiri Shenzhen Imbwa Zuva reSvondo rakaitwa. Municipal Urban Management uye Comprehensive Law Enforcement Bureau yakazivisa kuvhurwa kwakazara kwebasa rekudyara imbwa dzemagetsi. Imbwa dzese mu c ...
RFID zvipfeko chiteshi manejimendi inovandudza kugadzirwa manejimendi kugona
Mukugadzirwa kwemaitiro emakambani echinyakare ekugadzira, iyo yekumberi modhi modhi inotungamirwa neyechete-chidimbu kugadzirwa. Kana imwechete iyi-chidimbu chekugadzira mutsara modhi ikasangana nemaitiro akaomarara uye akawanda maumbirwo ekugadzira, matambudziko akasiyana anowanzooneka. Murume akapfeka ...
Shanghai Yevana Medical Center inovaka akangwara manejimendi ekurapa marara uye inovandudza kushanda kweyekurapa marara kuunganidzwa uye kuendesa kuburikidza neRFID
ne admin pane 20-12-12
Parizvino, huwandu hwemarara ekurapa hunogadzirwa munyika yedu huri kuwedzera gore rimwe nerimwe, uye kudzivirira zvirwere nekudzivirira uye njodzi dzezvakatipoteredza zviri kuwedzerawo. Kunyanya kubva pakatanga chirwere chekorona nyowani, kuraswa kwakachengeteka kwemarara ekurapa kwakanangana zvakananga ne overa ...
“Mumakore gumi apfuura, ndinonzwa zvakadzama zvikuru. Doro rakatsiva waini tsvuku mukudya kwemabhizimusi. Mumakore maviri kana matatu apfuura, zvave pachena kuti doro rakasiyanisa doro rekare kubva kune zvimwe zvinwiwa. Doro rekare rinogona kutaura dzimwe nyaya. ” PAX Sachigaro uye Chief Research O ...